पाँचथरमा सामूहिक हत्या प्रकरण : हत्याराको हुलिया खुल्यो, यसरी गरेका थिए हत्या ? — Motivatenews.Com
पाँचथरमा सामूहिक हत्या प्रकरण : हत्याराको हुलिया खुल्यो, यसरी गरेका थिए हत्या ?
काठमाडौं – दुई परिवारका ९ जनाको विभत्स हत्या गर्ने ब्यक्ति परिवारकै सदस्य भएको प्रहरीको प्ररम्भिक अनुसन्धानले लगाएको छ । पाँचथरको मिक्लाजुङ–३, आरुबोटेमा भएको सामूहिक हत्या घटनामा फियाक परिवारका ज्वाइँको संलग्नता रहेको हुनसक्ने प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरी अधिकारीका अनुसार संदिग्ध व्यक्तिको रुपमा देखाएका मानबहादुर माखिमको शव मिक्लाजुङ–८, लुमाङ्दिनमा झुण्डिएको अवस्थामा भेटिएको छ । अनुसन्धान टोली स्रोतका अनुसार रुखमा झुण्डिएको अवस्थामा भेटिएका माखिम मृतक अनुसार माखिमको ससुराली परिवारसँग राम्रो सम्बन्ध थिएन । ‘श्रीमतीले पछिल्लो समय उनीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेकी थिइन्’, स्रोतले भन्यो ।